गजलको संसारः के हो, कसरी लेख्ने र के कुरामा ध्यान दिने ? - Everest Dainik - News from Nepal
गजलको संसारः के हो, कसरी लेख्ने र के कुरामा ध्यान दिने ?
साहित्यका अरु विधा जस्तै गजल पनि परापूर्व काल देखिनै चल्दै आएको विधा हो । गजलको उद्गम स्थल अरब भूमिलाई मानिन्छ । विशेषतः फारसी, उर्दू, हिन्दी हुँदै नेपालीमा आएको पाईन्छ । अरबी भाषामा ग को अर्थ वाणी ज को अर्थ नारी र अलको अर्थ को वा सँग हुन्छ । गजलको नामाकरण कसरी गरियो यसको एउटै उत्तर भेटिर्दन तर पनि अर्थ भने प्राय सबैले एकै किसिमका गरेका छन् ।
गजलको शाब्दिक अर्थ प्रेमिकासँगको कुराकानी,स्त्रीको वाणी, प्रेमिकाका विषयमा कुराकानी, प्रणयवार्ता, यौवना नारीको वर्णन गर्नु,प्रेमको भावना व्यक्त गर्नु आदि हुन्छ । फारसी भाषामा गजलको अर्थ नारीका कुरा हुन्छ । केही विद्धानहरुको तार्किक मान्यता गजल फारसी शब्द हो,जसको तात्पर्य प्रणय प्रधान गीत हो । वास्तवमा गजलको खास अर्थ नै प्रेम हो भन्ने तर्क प्राय सबै विद्धानहरुले जिकिर गरेका छन् ।
नेपाली शब्दकोषका अनुसार प्रेमका विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एक प्रकारको फारसी वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कविता नै गजल हो । उर्दू र हिन्दी शब्दकोषले प्रेमिकासँग कुराकानी भन्ने अर्थ दिएका छन् । विद्धानहरुले आ–आफ्नै किसिमले गजलको परिभाषा दिएका भए पनि निष्कर्षमा गजल भनेको प्रेमलाई समेटेर निश्चित लय र तालमा लेखिने कविता हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
गजल बारे नेपालको सन्र्दभमा भन्नु पर्दा मोतिराम भट्टले विक्रम सम्वत् १९४० साल तिर भित्र्याएको भएता पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भने भिमनीधि तिवारी, आँसुकवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल,उपेन्द्र बहादुर जिगरले निरन्तरता दिएका थिए । प्राथमिक काल र माध्यमिक कालतिर गजलले कुनै पनि नयाँ मोड दिन नसकेता पनि महत्वपूर्ण देन दिएको पाइन्छ । आज सम्म आईपुग्दा गजल हामी सबैमा भिजी सकेको विधा हो । तसर्थ नेपाली साहित्याकाशमा गजल विधाले राम्रै फट्को मार्न सफल रहेको छ ।
वास्तवमा गजल कस्तो हुनुपर्दछ यसमा विद्धानहरुको आ–आफ्नै मान्यता भए पनि साझा मान्यताका रुपमा निम्न कुराहरु अगाडि सारेका छन् । गजल संरचनाका हिसाबले प्राविधिक विधा हो भने भावका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील विधा हो । गजलमा भाव र विम्बको जसरी अपेक्षा गरिन्छ, त्यससँगै शब्दगत सरलता, कोमलता, हार्दिकता, जीवन्तता, लयात्मकता र संप्रेषणीयता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । श्रुतिकटु, अश्लिल, दुरुह, क्लिट, अभद्र, अपमान तथा अनादारवाची शब्दहरु गजलमा मान्य हुँदैन । गालीपनि मीठो शब्दले गर्न जान्नु पर्दछ ।
प्राविधिक विधा भएकै कारण संरचनामात्र यसको प्रमुख कुरा भने होईन । भाव, विम्ब र शिल्पमात्र पनि जरुरी होईन । गजलमा रहेका आन्तरिक संरचना र वाह्य संरचनामा सचेतता अत्यन्त आवश्यक कुरा हुन् । यिनीहरुको उचित समायोजनबाट मात्र सुन्दर गजल जन्मन सक्छ । गजलका विषयवस्तुका बारेमा जति चर्चा परिचर्चा भए पनि वाचन गरिने, छापिने र गाइने गजल फरक हुन सक्दैनन् । समग्रमा गजल एउटे किसिमका हुनु पदर्छ । गजल हुनलाई के के तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ त्यो जान्नु अति आवश्यक छ । गजल हुनलाई चाहिने मुलभुत तत्वहरु निम्न छन् ।
याे पनि पढ्नुस गजल
याे पनि पढ्नुस ‘तिम्रै यादमा कैयौं रात अनिँदो भई बिते’